Waxa Ay Ku Socdeen Tacsi Iyaga Ayaa Loo Tacsiyeeyey | Xaqiiqonews
Waxa Ay Ku Socdeen Tacsi Iyaga Ayaa Loo Tacsiyeeyey
Marka aad ku nooshahay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, daqiiqad walbo waxa aad filan kartaa “geeri”, geeri aadan xitaa ogaan karin cidda ku dishay, siiba marka aad ka baxdo guriga, waxaana tusaale kaga filan wixii saakay ku dhacay gaari dad rayid ay saarnaayeen.
Dadka aan ogeyn dhacdadan , gaari noociisu ahaa baska yar ee gudaha looga yaqaan “hoomey” ayey miino kula qaraxday deegaanka Xaawo Cabdi ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Gabar Kaliya Ayaa Badbaaday
Inta la xaqiijiyey waxaa geeriyooday 19 qof, dhowr kale ayuu dhaawac soo gaaray, waxaana la sheegay in baabuurka ay ka badbaaday hal gabar oo kaliya.
Qaraxan oo aan aheyn kii ugu horeeyey ee noocisa ah oo dad rayid ku dhintaan oo ka dhaca wadadan xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, ayeysan jirin ilaa hadda cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxa.
Sidoo Kale Aqri..Duqeyn Mise Dulmi Iyo Dambiyo Dagaal
Baabuurka qaraxa la kacay ayaa la sheegay in ay saarnaayeen dad ku socday tacsi, degmada Wanla weyn ee gobolka Shabeelaha hoose.
Shalay Shabeelaha Dhexe Maanta Shabeelaha Hoose!
Intiina Wararka la socotay, waxaa ogtihiin in maalinimadi arbacada ee 27 May ay dhacday “dhacdo xanuun badan” oo lagu dilay 9 dhalinyarro ah oo ka shaqeeynaayey xarun caafimaad oo ku taala deegaanka Gololeey ee gobolka Shabeelaha dhexe.
Tii Shalay ka dhacday Sh/dhexe iyo tan Maanta ee Sh/Hoose waxa ay iskugu imaanayaan hal gabogabo oo ah “lama yaqaan cidda dishay”.